ပိုက်ဆံမဖြည့်ဘဲအိမ်မှာဝိုင်ဖိုင် signal ကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရမလဲ Gadget သတင်း
Rafa Rodríguez Ballesteros | | ယေဘုယျ, နေအိမ်
ဒီနေ့မင်းတို့ကိုမင်းလုပ်နိုင်တဲ့ post တစ်ခုယူလာပေးပြီ ပြည်တွင်း wifi အချက်ပြ၏ထိရောက်မှုကိုတိုးတက်စေသည်။ အိပ်ရာဝင်ချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သည်အင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ဒါကငါတို့မြင်ချင်လားမမြင်ဘူးလား။ Y အိမ်တွင်ဝိုင်ဖိုင်ကောင်းကောင်းရှိခြင်းကကျွန်ုပ်တို့အားကောင်းသောစိတ်နေစိတ်ထားကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရသောအနှောင့်အယှက်တစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့၏အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အိမ်တွင်ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း၊ သင်၏စမတ်ဖုန်းဖြင့်လူမှုကွန်ယက်များနှင့်တိုင်ပင်သည်ဖြစ်စေ၊ Wi-Fi ပျက်ကွက်ခြင်းသည်ဒေါသနှင့်တူသည်။ ဒီနေ့မင်းတို့ကိုငါတို့ပေးမယ် သင့်ရဲ့ Wi-Fi ချိတ်ဆက်မှုသိသိသာသာတိုးတက်လာဖို့အတွက်ရိုးရှင်းတဲ့အကြံဥာဏ်အချို့။ မင်းစိတ်ဝင်စားလား?
1 သင်၏အိမ် Wi-Fi ကိုလွယ်ကူစွာနှင့်အလွယ်တကူတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပါ
2 router တည်နေရာကိုပြောင်းပါ
4 ကျွန်ုပ်တို့၏ router အသုံးပြုသည့် Wi-Fi channel ကိုပြောင်းလဲပါ
6 router အဟောင်းကိုသုံးပါ
သင်၏အိမ် Wi-Fi ကိုလွယ်ကူစွာနှင့်အလွယ်တကူတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပါ
စျေးကွက်ထဲမှာရှိပါတယ် ကျွန်တော်တို့ကို signal ကိုတိုးချဲ့ပူဇော်ဖို့ဒီဇိုင်းဆက်သွယ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောထုတ်ကုန်၏အဆုံးမရှိ။ ထိရောက်စွာသောကိရိယာများ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ wifi အချက်ပြကိုထပ်ပွားပါ ဒါဆိုငါတို့အိမ်တိုင်းထောင့်တိုင်းကိုရောက်တယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အလုပ်လုပ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အိမ်တွင်ဝိုင်ဖိုင်လွှမ်းခြုံမှုကိုရရှိစေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်ပြမှုကောင်းမွန်စွာမဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာအသင်းများကိုယ်တိုင်တွင်ဖြစ်နိုင်သည်။ သူတို့ကတူညီတဲ့ထိရောက်သောဆက်သွယ်မှုမရှိကြပါဘူး လက်ရှိ router တစ်ခု နှစ်ပေါင်းများစွာနှင့်အတူအခြားထက်။ ငါတို့ ကွန်ပျူတာ (သို့) စမတ်ဖုန်း၊ ၄ င်းတို့တွင်လက်ရှိ Wi-Fi အသံဖမ်းကိရိယာများနည်းပါးပြီး၊ ၎င်းသည် Wi-Fi ဆက်သွယ်မှု၏ထိရောက်မှုကိုလွှမ်းမိုးနိုင်သည်။
ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ငါတို့အဆိုပြုချင်တယ် လည်းအထောက်အကူဖြစ်စေခြင်းငှါအခမဲ့အခြားနည်းလမ်း။ အိမ်တွင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်ရိုးရှင်းသောအဆင့်အချို့မှာ Wi-Fi အချက်ပြမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောနေရာသို့ပိုမိုရောက်ရှိနိုင်သည်။ သူတို့သည်သင့်အတွက်အလုပ်မလုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်သူတို့ကိုစမ်းသပ်ပြီးပြီဖြစ်သော်လည်းဖြစ်နိုင်သည်မှာထင်သာမြင်သာသော်လည်းအခမဲ့အကြံပေးချက်အချို့သည်ဤတွင်ဖြစ်သည်။ သင်၏ဝိုင်ဖိုင်အချက်ပြမှုကိုပိုမိုထိရောက်စေနိုင်သည်.
ဒါဟာမိုက်မဲပေမယ့်ထင်ရပေမည် ကျွန်ုပ်တို့သည် router ကိုအိမ်တွင်နေရာချသည့်နေရာသည် signal ၏အရည်အသွေးကိုများစွာလွှမ်းမိုးနိုင်သည်ဟုပြသခဲ့သည် ငါတို့လက်ခံရရှိကြောင်း။ ၀ ိုင်ဖိုင်ဆက်သွယ်မှုလှိုင်းများကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒြပ်စင်များကတားဆီးနိုင်သည် ငါတို့အိမ်၏။ မှန်ကန်သော်လည်း router များနှင့်၎င်းတို့၏ antenna များသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှတိုးတက်လာသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်သည့်အခါ router ကိုသတ်မှတ်ထားသည့်အိမ်ဖုန်းရှိသည့်နေရာ၌ထားခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုံးစံဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနည်းကအရာအားလုံးကိုပိုပြီးဗဟိုပြုပြီးပိုမိုလွယ်ကူစွာချိတ်ဆက်ထားလို့ပဲ။ ဒါပေမယ့်ဖုန်းကသိပ်မကောင်းဘူးဆိုရင်တော့အဖြေကမှားနေတယ်။ သူ၏အရာသည် router ကိုရှေ့တွင်အတားအဆီးမရှိသောနေရာတွင်ထားရန်ဖြစ်သည် ထိုကဲ့သို့သောနံရံများ, ကော်လံ, စင်ပေါ်, စသည်တို့ကို Y ပိုမိုမြင့်မား ဒါ အချက်ပြပိုကောင်းလေ ထုတ်လွှတ်ရန်။
အလုံခြုံဆုံးအရာက ဘယ်တော့မှခင်ဗျား router ကိုအိမ်မှာကတည်းက သင်စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲပြီ ဒါကြောင့်စက်ရုံကနေဆောင်တတ်၏။ ဤအရာသည်အသုံးပြုသူစကားဝှက်ကို hack လိုသူများအတွက်သင်၏ connection ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ အဲဒါပြတယ် ၎င်းသည် Wi-Fi စကားဝှက်ကိုကုမ္ပဏီများမှပုံမှန်သတ်မှတ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်ငါတို့ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးတာထက်
အင်တာနက်ကိုနေ့စဉ်သုံးစဉ်၊ များသောအားဖြင့်လူသုံး ဦး၊ သုံး ဦး၊ ၄ ယောက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ router သို့ချိတ်ဆက်မိသည်ကိုအရေးမကြီးပါ။ ဒါပေမယ့် ဟုတ်တယ် ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်သူများ သို့မဟုတ်အများအပြား သူတို့ထဲကသူတို့ကြိုးစားရန် ကြီးမားသောဖိုင်များကို download လုပ်ပါ, ပြီးတော့သူတို့ကဒီဟုတ်ကဲ့, မကြာခဏလုပ်ပါ သိသိသာသာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်မှု၏အမြန်နှုန်းကိုသြဇာလွှမ်းမိုးလိမ့်မယ်.
ကုမ္ပဏီတစ်ခုစီအတွက်စကားဝှက်ကုဒ်များကိုကျပန်းထုတ်ပေးသည့်ပရိုဂရမ်များရှိပါသည်။ ပြီးတော့ အတော်လေးလွယ်ကူမြန်ဆန်, မှန်ကန်သောအစီအစဉ်နှင့်အတူ ကြီးစွာသောအသိပညာမလိုဘဲ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ, ရ သော့ကိုစာဝှက်ဖြည်ပြီးသင်၏ router ကိုလွတ်လပ်စွာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။ ဒါဆိုမင်းဘာကိုစောင့်နေတာလဲ သင်၏စကားဝှက်ကိုယခုပြောင်းလဲပါ။ သင်၏ကွန်ယက်ကိုခွင့်ပြုချက်မရပဲမည်သူ့ကိုမျှဆက်သွယ်ခွင့်မပြုပါနှင့်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ router အသုံးပြုသည့် Wi-Fi channel ကိုပြောင်းလဲပါ
ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သလို သင်ဝန်းရံနေသောပတ်ဝန်းကျင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်ပြမှုအရည်အသွေးကိုလည်းလွှမ်းမိုးသည်။ အဆိုပါ အနီးအနားရှိ Wi-Fi ထုတ်လွှတ်မှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ င်ရောက်မှုပုံစံကိုလွှမ်းမိုးသည်။ ဒီအဘို့အကအကြောင်းသိရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ router ကဘယ် band အလုပ်လုပ်လဲနှင့်အနည်းဆုံးရွှဲနှင့်အတူလမ်းကြောင်းများစစ်တမ်းကောက်ယူ။
လက်ရှိ router များအလိုအလျောက် ၎င်းကိုတည်ရှိသည့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိအသုံးအများဆုံး band များကိုစစ်ဆေးပါ။ ဤနည်းအားဖြင့်၎င်းတို့သည်အကောင်းဆုံးသောအချက်ပြမှုကိုပေးနိုင်ရန်ရရှိနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးတီးဝိုင်းကိုတည်ထောင်ကြသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အမြဲတမ်းလုံးဝထိရောက်မှုမရှိပါ။ ဒီအဘို့ရှိပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီနိုင်သောစမတ်ဖုန်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာအတွက်ပရိုဂရမ်များ.
ဒါ အားလုံးအစီအမံများအထိရောက်ဆုံး။ ဒါပေမယ့်ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့သည်ရွေ့လျားမှုနှင့်မည်သည့်ထောင့်တွင်မဆိုချိတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်နိုင်ချေကိုဆုံးရှုံးသည် အိမ်၏။ ပြproblemနာကငါတို့နေထိုင်တဲ့onရိယာပေါ်မူတည်။ တူညီသောinရိယာအတွင်းရှိ Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုများပြည့်နှက်နေခြင်းကသူတို့ကိုထပ်တူကျစေသည် နှင့်မရေတွက်နိုင်သောဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုပေါ်ထွန်း။ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖြတ်တောက်မှုများ, အကြီးအကျယ်နှေးကွေးသို့မဟုတ်လာနှင့်သွားပေါ်သို့ပျက်ကျမှုသည်ဤဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု၏အကျိုးဆက်များအများအပြားဖြစ်ကြသည်။
သင်လိုအပ်သောဆက်သွယ်မှုသည်ဆိုပါက အလုပ်ခွင်အတွက်အိမ်မှာဖြစ်စေရုံးမှာဖြစ်စေ အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်မှာ wired connection ဖြစ်သည်။ ဒီကိစ္စမှာ၊ ကွန်ပျူတာကိုအလုပ်လုပ်ဖို့ဆက်သွယ်မှုအကြောင်းပြောနေတာပါ။ တက်ဘလက်သို့မဟုတ်ကေဘယ်လ်ကြိုးဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်စမတ်ဖုန်းဖြင့်လမ်းလျှောက်ခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်မရှိကြောင်း၊ ၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်အခက်အခဲများရှိကြောင်းထင်ရှားသည်။
ဒါပေမယ့်ငါတို့လိုချင်ရင် ၁၀၀% တည်ငြိမ်ပြီးလုံခြုံသောဆက်သွယ်မှုနှင့်အမြင့်ဆုံးကန်ထရိုက်မြန်နှုန်းရှိခြင်းကိုအာမခံသည်ဤအခြေအနေမျိုးကိုအာမခံနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောဖြေရှင်းနည်းသည် cable ဖြစ်သည်။ လူအများအတွက်၊ ကေဘယ်လ်နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း နောက်ကျောဆက်သွယ်မှုများ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတွက်ခြေလှမ်းကိုကိုယ်စားပြုတယ်နှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ယနေ့တွင်ဝါယာကြိုးဆက်သွယ်မှု နေဆဲ.
များစွာသောလက်လှမ်းမီနိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်သည့်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာ - ဖြစ်သည် router အဟောင်းကိုအသုံးပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီများကိုပြောင်းလဲသောအခါတစ်ခါတစ်ရံအလိုရှိသည်ထက်များသောအားဖြင့်လုပ်လေ့ရှိသောကျွန်ုပ်တို့သည်ပြောင်းလဲနေသည့်အရာသည်သင်အံဆွဲထဲ၌အသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်သွားစေလိမ့်မည်။ Y အခြေခံဖွဲ့စည်းမှုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်ပြမှုကိုနှစ်ဆတိုးနိုင်သည် တစ် ဦး ပြန်လုပ်အဖြစ်အသုံးပြုရန်။
ငါတို့လုပ်ရလိမ့်မယ် စက်ရုံ settings ကို restore လုပ်ပါကျွန်ုပ်တို့သုံးစွဲသော operating system ပေါ် မူတည်၍ Windows သို့မဟုတ် MacOs၊ router ကိုယ်တိုင်၏ menu ကိုတိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသော router ၏ပုံစံနှင့်အမှတ်အသားပေါ်တွင်လည်းမူတည်သည်။ သို့သော်လုပ်ဆောင်ရမည့်အဆင့်များသည်အတူတူဖြစ်သည်။
ကြှနျုပျတို့ ... လုပျရမညျ ကျွန်ုပ်တို့၏ router အဟောင်းကို wifi access point repeater အဖြစ် configure လုပ်ပါ။ ဒီဟာကိုလုပ်ရမယ် ကျနော်တို့ပြန်လုပ်ချင်သော signal ကိုရွေးချယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အားလုံးတွင်ပါ ၀ င်ရမည့်ဝင်ရောက်ခွင့်စကားဝှက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးမည်။ နှင့်ဤလမ်းအတွက် အိမ်မှာ wifi access point နှစ်ခုရလိမ့်မယ်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » အိမ်တွင်ဝိုင်ဖိုင် signal ကိုမည်သို့တိုးတက်အောင်လုပ်ရမည်နည်း